Bhuku reBhaibheri Nhamba 18—Jobho — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Bhuku reBhaibheri Nhamba 18—Jobho
ZVIRI MUBHUKU RAJOBHO
Pfungwa Huru Dzatinowana Mubhuku raJobho
Jobho Akatsungirira—Isu Tinogonawo!
Nzvimbo Yakanyorerwa: Renje
Kunyora Kwakapedzwa: Munenge muna 1473 B.C.E.
Nguva Yakafukidzwa: Anopfuura makore 140 pakati pa1657 na1473 B.C.E.
1. Zita raJobho rinorevei, uye bhuku raJobho rinopindura mibvunzoi?
NDIRIMWE ramabhuku ekaresa aMagwaro akafuridzirwa! Ibhuku rinokudzwa zvikurusa uye rinowanzonokorwa mashoko, bva iro rinonzwisiswa zvishoma norudzi rwomunhu. Neiko iri bhuku rakanyorwa, uye rine ukoshii nokuda kwedu nhasi? Mhinduro yacho inoratidzirwa murevo yezita raJobho: “Nyajambwa Woutsinye.” Hungu, bhuku iri rinokurukura mibvunzo miviri inokosha: Neiko vasina mhaka vachitambura? Neiko Mwari achibvumidza uipi mupasi? Tine chinyorwa chokutambura kwaJobho netsungiriro yake huru zvokuti tirangarire mukupindura iyi mibvunzo. Chose chakanyorwa, seizvo Jobho akakumbira.—Jobho 19:23, 24.
2. Chii chinobvumikisa kuti Jobho akanga ari munhu chaiyeiye?
2 Zita rokuti Jobho rakava rinoreva zvakafanana neshiviriro netsungiriro. Asika kwakanga kune munhu akadai saJobho here? Pasinei hapo nenhamburiko dzose dzaDhiyabhorosi dzokubvisa muenzaniso uyu wakaisvonaka weperero mumapeji enhau, mhinduro yakajeka. Jobho akanga ari munhu chaiyeiye! Jehovha anomududza pamwe chete nezvapupu Zvake Noa naDhanieri, vane kuvapo kwakabvumwa naJesu Kristu. (Ezek. 14:14, 20; enzanisa naMateo 24:15, 37.) Rudzi rwakare rwechiHebheru rwakarangarira Jobho somunhu chaiyeiye. Munyori wechiKristu Jakobho anonongedzera kumuenzaniso waJobho wetsungiriro. (Jak. 5:11) Muenzaniso chaiwoiwo bedzi, kwete uya wengano, waizova noukoshi, uchipwisa vanamati vaMwari kuti perero inogona kuchengetwa mumamirire ose ezvinhu. Uyezve, ukombi nesimba zvokutaura kwakanyorwa mubhuku raJobho zvinopupurira zvomenemene yamamiriro ezvinhu.
3. Ufakazii hunopupurira kufuridzirwa kwebhuku raJobho?
3 Kuti bhuku raJobho nderechokwadi uye rakafuridzirwa kunobvumikiswawo mukuti vaHebheru vakare vaigaroribatanidza mundaza yavo yamanyoro matsvene eBhaibheri, idi rakatanhamara mukuti Jobho amene akanga asiri muIsraeri. Mukuwedzera kunongedzero dzakaitwa naEzekieri naJakobho, bhuku racho rinonokorwa mashoko nomuapostora Pauro. (Jobho 5:13; 1 VaK. 3:19) Chibvumikiso chakasimba chokufuridzirwa kwebhuku racho chinopiwa mutsinhirano yaro inoshamisa namaidi akabvumikiswa esayenzi. Kwaigona sei kuzivikanwa kuti Jehovha ano“turika pasi pasina chinhu,” apo vakare vakanga vane mifungo yokufungidzira zvikurusa pamusoro pokuti pasi rakatsigirwa sei? (Jobho 26:7, NW) Murangariro mumwe wairangarirwa munguva dzekare wakanga uri wokuti pasi rakanga rakatsigirwa nenzou imire pakamba huru yomugungwa. Neiko bhuku raJobho risingaratidziri kusava nomufungo kwakadaro? Sezvinooneka imhaka yokuti Jehovha Musiki akagovera zvokwadi kupfurikidza nefuridziro. Kumwe kurondedzerwa kuzhinji kwapasi nezvishamiso zvaro nokwemhuka neshiri munzvimbo dzazvo dzomusikirwo kwakarurama kwazvo zvokuti Jehovha Mwari bedzi aigona kuva Munyori noMufuridziri webhuku raJobho.*
4. Mutambo wacho wakaitikira kupi uye rini, uye kunyorwa kwebhuku raJobho kwakapedzwa rini?
4 Jobho aigara muUzi, iri, maererano nenyanzvi dzejogirafi, kuchamhembe kweArabia pedyo nenyika yaigarwa navaEdhomi uye kumabvazuva kwenyika yakapikirwa kuvana vaAbrahama. VaSabhea vaiva kumaodzanyemba, vaKardhea kumabvazuva. (1:1, 3, 15, 17) Nguva yomuedzo waJobho yakanga iri nguva refu pashure pezuva raAbrahama. Pakanga pari panguva apo kwakanga kusi“na munhu akafanana na[Jobho] mupasi, munhu asina chaanopomerwa uye akarurama.” (1:8, NW) Iyoyi inoratidzika kuva nhambo iri pakati porufu rwaJosefa (1657 B.C.E.), munhu wokutenda kwakatanhamara, uye nguva iyo Mosesi akapinda munzira yake yeperero. Jobho akaita zvakaisvonaka mukunamata kwakachena paiyi nhambo yokushatswa kwaIsraeri nokunamata madhemoni kweEgipita. Kupfuurirazve, miitiro inodudzwa muganhuro rokutanga rebhuku raJobho, uye kugamuchira kwaMwari Jobho somunamati wechokwadi, zvinonongedzera kunguva dzamadzitateguru panzvimbo penhambo yapashure inovambira muna 1513 B.C.E. zvichienda mberi, apo Mwari akabata chose chose naIsraeri muMutemo. (Amo. 3:2; VaEf. 2:12) Nokudaro, kubvumira upenyu hurefu hwaJobho, kunoratidzika kuti bhuku racho rinofukidza nhambo iri pakati pa1657 B.C.E. uye 1473 B.C.E., gore rorufu rwaMosesi; bhuku racho rakapedzwa naMosesi pane imwe nguva pashure porufu rwaJobho uye apo vaIsraeri vaiva murenje.—Jobho 1:8; 42:16, 17.
5. Chii chinoratidzira kunyora kwaMosesi bhuku raJobho?
5 Neiko tichitaura kuti Mosesi aiva munyori? Ikoku kuri maererano negamuchidzanwa rekaresa, raiva pakati pavose vari vaviri vazivi vechiJudha navechiKristu vapakuvamba. Munyorero wakasimba wechokwadi wenhetembwa dzechiHebheru wakashandiswa mubhuku raJobho unoita kuti kuve pachena kuti wakanga uri munyorero wapakuvamba wechiHebheru, mutauro waMosesi. Waisagona kuve waiva shanduro yakabva muno mumwe mutauro wakadai sechiArabhu. Uyewo, zvikamu zvamashoko zviri mumutaurowo zvawo zvakatodzana zvikuru nePentateuch kupfuura mamwe manyoro api naapi ari muBhaibheri. Munyori wacho anofanira kuve aiva muIsraeri, sezvaiva zvakaita Mosesi, nemhaka yokuti vaJudha “vakanga vakaronzwa mashoko anoyera aMwari.” (VaR. 3:1, 2, NW) Pashure pokunge akura, Mosesi akapedzera makore 40 muMidhiani, kusati kuri kure neUzi, uko aigona kuwana mashoko ane udzame akanyorwa mubhuku raJobho. Gare gare, apo iye akapfuura pedyo nenyika yokumusha kwaJobho mukati morwendo rwomurenje rwamakore 40 rwaIsraeri, Mosesi aigona kuziva ndokunyora udzame hwokugumisira mubhuku racho.
6. Bhuku raJobho rinopfuura zvikuru kwazvo kuva bhuku rounyanzvi mumativii?
6 Mukuwirirana neThe New Encyclopædia Britannica, bhuku raJobho kazhinji kazhinji rino“verengerwa pakati pamabhuku enyika ounyanzvi zvikuru.”* Zvisinei, bhuku racho rinopfuura zvikuru kungovawo zvaro bhuku rounyanzvi zvikuru. Bhuku raJobho rakatanhamara pakati pamabhuku eBhaibheri mukurumbidza simba, ruramisiro, uchenjeri, uye rudo zvaJehovha. Rinozivisa zvakajeka zvikurusa nhau yokutanga chisiko chose chisati chavapo. Rinojekesa zvakawanda zvinotaurwa muna mamwe mabhuku eBhaibheri, zvikurukuru Genesi, Eksodho, Muparidzi, Ruka, VaRoma, uye Zvakazarurwa. (Enzanisa Jobho 1:6-12; 2:1-7 naGenesi 3:15; Eksodho 9:16; Ruka 22:31, 32; VaRoma 9:16-19 naZvakazarurwa 12:9; uyewo Jobho 1:21; 24:15; 21:23-26; 28:28 mukutevedzana naMuparidzi 5:15; 8:11; 9:2, 3; 12:13.) Rinogovera mhinduro kumizhinji yemibvunzo youpenyu. Zvirokwazvo rutivi runokosha rweShoko rakafuridzirwa raMwari, uko rinobetsera zvikuru mukunzwisisa kunobetsera.
7. Tinowana Jobho ari mumamiriroi ezvinhu sezvo bhuku racho rinotanga?
7 Sumo kubhuku raJobho (1:1-5). Iyoyi inotisuma kubhuku raJobho, munhu “asina chaanopomerwa uye akarurama, uye anotya Mwari naanobva pane zvakashata.” Jobho anofara, zvaane vanakomana vanomwe navasikana vatatu. Iye muzvinanyika akapfuma mune zvokunyama aine mapoka akawanda amakwai namatanga ezvipfuwo. Ane vabatiri vakawanda uye ndiye “mukurusa waVokumabvazuva vose.” (1:1-3, NW) Zvisinei, haasiri mudi wezvinhu zvenyika, nokuti haaisi chivimbo chake mupfuma yake yokunyama. Akapfumawo mumudzimu, akapfuma mumabasa akanaka, anodisa panguva dzose kubetsera mumwe munhu anotambudzika kana kuti ari mudambudziko, kana kuti kupa nguo kuna ani naani anoida. (29:12-16; 31:19, 20) Vose vanomuremekedza. Jobho anonamata Mwari wechokwadi, Jehovha. Anoramba kukotamira zuva, mwedzi, uye nyeredzi sezvaiita marudzi echihedheni, asi iye akatendeka kuna Jehovha, achichengeta perero kuna Mwari wake uye achifarikanya ukama hwapedyo naIye. (29:7, 21-25; 31:26, 27; 29:4) Jobho anobatira somuprista nokuda kwemhuri yake, achipa zvibayiro zvinopiswa nguva dzose, zvimwe vatadza.
8. (a) Satani anouya sei kuzodenha perero yaJobho? (b) Jehovha anogamuchira sei denho yacho?
8 Satani anodenha Mwari (1:6–2:13). Nenzira inoshamisa chidzitiro chokusaona chinovhurwa kuti tigone kuona zvinhu zvokudenga. Jehovha anoonwa achitungamirira gungano ravanakomana vaMwari. Satani anosvikawo pakati pavo. Jehovha anokwevera ngwariro kumubatiri wake akatendeka Jobho, asi Satani anodenha perero yaJobho, achipomera kuti Jobho anobatira Mwari nemhaka yebetsero dzokunyama dzinogamuchirwa. Kana Mwari achizobvumira Satani kutora izvozvi, Jobho achabva paperero yake. Jehovha anogamuchira denho yacho, neganhuriro yokuti Satani anofanira kusagunzva Jobho amene.
9. (a) Miedzoi yakakomba inowira Jobho? (b) Chii chinobvumikisa kuti anochengeta perero?
9 Ngwavaira zhinji dzinotanga kuwira Jobho asingafungidziri. Kupamba kunoitwa navaSabhea navaKardhea kunobvisa pfuma yake huru. Dutu rinouraya vanakomana vake navanasikana. Uyu muedzo wakakomba unokundikana kuita kuti Jobho atuke Mwari kana kuti kubva kwaari. Panzvimbo pako, anoti, “Zita raJehovha ngaripfuurire kurumbidzwa.” (1:21, NW) Satani, akurirwa uye abvumikiswa kuva murevi wenhema pane iyi nhau, anosvikazve pamberi paJehovha ndokupomera, kuti: “Ganda nokuda kweganda, uye chinhu chiri chose chine munhu achachipa nokuda kwomweya wake.” (2:4, NW) Satani anotaura kuti kudai akabvumidzwa kugunzva muviri waJobho, aigona kuita kuti Jobho atuke Mwari pachena. Aine mvumo yokuita chinhu chiri chose kunze kwokutora upenyu hwaJobho, Satani anorovanya Jobho nehosha inotyisa. Nyama yake inova “inofukidzwa nehonye namavhinga ehuruva,” uye muviri wake nemweya zvinova zvinonhuwira mudzimai wake nehama dzokunyama. (7:5, NW; 19:13-20) Kuratidzira kuti Jobho haana kuputsa perero yake, mudzimai wake anomukurudzira, kuti: “Uchiri akaomerera paperero yako here? Tuka Mwari ugofa!” Jobho anomutsiura uye haa“tadzi nomuromo wake.”—2:9, 10, NW.
10. Satani anogovera “nyaradzo”i yakanyarara?
10 Satani zvino anomutsa shamwari nhatu, dzinouya kuzo“nyaradza” Jobho. Idzo ndiErifazi, Bhirdhadhi, uye Zofari. Dziri kure hadzizivi Jobho, asi ipapo dzinopfuurira kusimudza manzwi adzo ndokuchema dzichikushira huruva pamisoro yadzo. Tevere, dzinogara pamberi pake pasi dzisingatauri shoko zvaro. Pashure pamazuva manonwe nousiku hweiyi “nyaradzo” yokunyarara, Jobho pakupedzisira anopedza uku kunyarara mukuzarura gakava refu navaizova vanyaradzi vake.—2:11.
11-13. Jobho anozarura sei gakava racho, Erifazi anoita pomeroi, uye ndeipi iri mhinduro youshingi yaJobho?
11 Gakava: nhambo yokutanga (3:1–14:22). Kubvira panguva ino zvichienda mberi, mutambo unotanga munhetembwa yakaisvonaka yechiHebheru. Jobho anotuka zuva rokuberekwa kwake uye anoshamiswa nechikonzero nei Mwari akamubvumidza kuti apfuurire kurarama.
12 Mukupindura, Erifazi anopomera Jobho kushayiwa perero. Vakarurama havana kutongoparara, anozivisa kudaro. Anoyeuka chiono chousiku umo inzwi rakamuudza kuti Mwari haatendi vabatiri vake, zvikurukuru avo vomunyakwewo zvawo, guruva rapasi. Anoratidzira kuti kutambura kwaJobho chirango chinobva kuna Mwari Wamasimba Ose.
13 Jobho anopindura Erifazi noushingi. Anodanidzira sezvaizoita chisikwa chipi nechipi chakanga chichitambura chitambudzo uye nhamo. Rufu rungava nyaradzo. Anozvidza shamwari dzake nokuda kwokumurukira mazano uye anoramba: “Ndirayiridzei, uye ini, kana ndirini, ndichanyarara; uye itai kuti ndinzwisise chikanganiso chandakaita.” (6:24, NW) Jobho anorwira kururama kwake amene pamberi paMwari, “Mucherekedzi worudzi rwomunhu.”—7:20, NW.
14, 15. Ndechipi chiri chibvumikiso chaBhirdhadhi, uye neiko Jobho achitya kuti acharasikirwa nenhau yake naMwari?
14 Bhirdhadhi zvino anotaura chibvumikiso chake, achiratidzira kuti vanakomana vaJobho vakatadza uye kuti Jobho amene haana kururama, nezvisizvo aizonzwiwa naMwari. Anorayiridza Jobho kutarira kuzvizvarwa zvekare uye kuzvinhu zvakatsvakwa namadzibaba avo senhungamiro.
15 Jobho anopindura, achiti Mwari haasati ari asina kururama. Uyewo Mwari haafaniri kuzvidavirira kumunhu, nokuti Iye “unoita zvinhu zvikuru zvisinganzvereki, uye zvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki.” (9:10, NW) Jobho haagoni kukurira Jehovha somukwikwidzani wake pamutemo. Anongogona bedzi kuteterera nyasha dzaMwari. Asika, pane betsero ipi neipi iripo here mukutsvaka kuita chiri chakarurama? “Unoparadza vakarurama navakaipa vose.” (9:22) Mupasi hamuna rutongeso rwakarurama. Jobho anotya kuti acharasikirwa nenhau yake kunyange naMwari. Anoda murevereri. Anobvunza chikonzero nei iye ari kuedzwa uye anoteterera Mwari kuti ayeuke kuti iye akaitwa no“munyakwe.” (10:9, NW) Anoonga mutsa womunguva yakapfuura waMwari, asi anoti Mwari achangonetswa bedzi zvikuru kwazvo kana iye akaita nharo, kunyange zvazvo iye akarurama. Iye angagona kuparara zvake!
16, 17. (a) Zofari anopa zanoi rokuzviruramisa? (b) Jobho anorangarira sei “vanyaradzi” vake, uye anoratidzira chivimboi chakasimba?
16 Zofari zvino anopinda mugakava racho. Anoti, kureva idi: Isu tiri vana here, kuti titeerere kutaura kusina maturo? Iwe unotaura kuti wakachena chaizvoizvo, asi kudai bedzi Mwari aizotaura, aizozivisa mhaka yako. Anobvunza Jobho, kuti: “Unganzwisisa zvakadzika zvaMwari here?” (11:7) Anopangira Jobho kubvisa miitiro inokuvadza, nokuti zvikomborero zvichauya kuna avo vanoita ikoku, nepo “meso amene avakaipa achakundikana.”—11:20, NW.
17 Jobho anodanidzira nokunyomba kwakasimba: “Zvirokwazvo, imi muri vanhu vakangwara, kungwara kuchafa pamwe chete nemi.” (12:2) Angava chiseko, asi haana kuderera. Kudai shamwari dzake dzaizotarira zvisiko zvaMwari, kunyange izvozvi zvaizovadzidzisa chimwe chinhu. Simba nouchenjeri hunoshanda ndezvaMwari, uyo anodzora zvinhu zvose, kunyange ku“ita kuti marudzi ave makuru, kuti agoaparadza.” (12:23, NW) Jobho anowana mufaro mukutaura nhau yake naMwari, asi kana vari “vanyaradzi” vake vatatu—“imi munofukidza zvose nenhema dzenyu, imi mose muri n’anga dzisina maturo.” (13:4) Hwaizova uchenjeri kwavari kuti varambe havo vakanyarara! Anoratidzira chivimbo muururami hwenhau yake uye anokumbira Mwari kuti amunzwe. Anotendeukira kumufungo wokuti “munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma, azere nokutambudzika.” (14:1) Munhu anokurumidza kupfuura, seruva kana kuti mumvuri. Haugoni kubereka mumwe munhu akachena anobva mune mumwe munhu asina kuchena. Mukunyengetera kuti Mwari agomuchengeta pakavanzika muSheori kutozosvikira hasha Dzake dzapfuura, Jobho anobvunza, kuti: “Kana munhu achinge afa, ungararamazve here?” Mukupindura anoratidzira tariro yakasimba, inoti: “Ndaimirira hangu . . . kusvikira kusunungurwa kwangu kuchisvika.”—14:13, 14.
18, 19. (a) Erifazi anotanga nhambo yechipiri yegakava nokunyombai? (b) Jobho anorangarira sei “nyaradzo” yeshamwari dzake, uye anotarira kuna Jehovha nokuda kwei?
18 Gakava: nhambo yechipiri (15:1–21:34). Mukutanga gakava rechipiri, Erifazi anoseka zivo yaJobho, achitaura kuti iye aka‘zadza dumbu rake nemhepo yamabvazuva.’ (15:2) Zvakare anozvidza kutaura kwaJobho kweperero, achitaura kuti hakuna munhu anofa kana kuti zvimwe vatsvene vari mumatenga vanogona kuva nokutenda mumeso aJehovha. Anopomera Jobho nomutoo usina kunanga kuedza kuzviratidzira amene kuva mukuru kuna Mwari uye kushandisa kuramba kutenda, fufuro, uye unyengeri.
19 Jobho anopindura nokukurumidza kuti shamwari dzake ‘vanyaradzi vanotambudza vana mashoko asina maturo.’ (16:2, 3) Kudai vaiva munzvimbo make, haasaizovazvidza. Anoshuva zvikuru kuva anoruramiswa, uye iye anovimba naJehovha, uyo ane chinyorwa chake uye uyo achasarudza nhau yake. Jobho haawani uchenjeri mushamwari dzake. Dzinobvisa tariro yose. “Nyaradzo” yavo yakafanana nokutaura kuti usiku masikati. Tariro bedzi ndeyoku‘burukira kuSheori.’—17:15, 16.
20, 21. Bhirdhadhi anoratidzira hashai, Jobho anorambei, uye Jobho anoratidza chivimbo chake kuva chiri kupi?
20 Kuitirana nharo kuri kuva kwakakomba. Bhirdhadhi zvino ava nehasha, nokuti anorangarira kuti Jobho aenzanisa shamwari dzake nemhuka dzisina nzwisiso. Anobvunza Jobho, kuti: ‘Pasi richasiyiwa nokuda kwako here?’ (18:4) Anonyevera kuti Jobho achawira mumusungo unotyisa, somuenzaniso kuna vamwe. Jobho haazovi nevana kuti vararame pashure pake.
21 Jobho anopindura, kuti: “Muchatambudza mweya wangu kusvikira riniko, nokundipwanya namashoko enyu here?” (19:2) Akarasikirwa nemhuri neshamwari, mudzimai wake neveimba yake vakabva kwaari, uye iye amene akapukunyuka bedzi ‘neganda rameno ake.’ (19:20) Anovimba nokuoneka kwomununuri kuti apedze nhau yacho nokuda kwake, kuti iye pakupedzisira ago“ona Mwari.”—19:25, 26.
22, 23. (a) Neiko Zofari achinzwa akuvadzwa, uye anotii pamusoro pezvivi zvinofungidzirwa zvaJobho? (b) Jobho anopindura nechibvumikisoi chinozvidza?
22 Zofari, saBhirdhadhi, anonzwa akuvadzwa nokufanira kuteerera “kutuka kunondinyadza” kwaJobho. (20:3) Anodzokorora kuti zvivi zvaJobho zvamusvikira. Vakaipa nguva dzose vanogamuchira chirango chinobva kuna Mwari, uye havana zororo, anodaro Zofari, kunyange vachingunofarikanya havo rubudiriro.
23 Jobho anopindura nenharo dzinozvidza: Kana Mwari nguva dzose achiranga vakaipa nenzira yakadai, neiko kuri kuti vakaipa vanopfuurira kurarama, kukwegura, kuva vakuru mupfuma? Vanopedzera mazuva avo munguva yakanaka. Ngwavaira inovawira kazhinji sei? Anoratidza kuti vapfumi navarombo vanofa zvakafanana. Kutaura idi, munhu akaipa anowanzofa aka“fara chose ane rugare,” nepo munhu akarurama angafa “ane shungu dzomwoyo.”—21:23, 25.
24, 25. (a) Erifazi nokuzviruramisa anochera Jobho nokureva nhema kwakadini? (b) Kurambai nokudenha izvo Jobho anoita mumhinduro?
24 Gakava: nhambo yechitatu (22:1–25:6). Erifazi anodenha nenzira youtsinye, achiseka kutaura kwaJobho kwokusava nemhaka pamberi poWamasimba Ose. Anochera Jobho zvenhema-nhema, achitaura kuti iye akashata, akadyeredzera varombo, akanyima zvokudya vane nzara, uye akabata chirikadzi navanakomana vasina vanababa zvisina kufanira. Erifazi anotaura kuti upenyu hwapachivande hwaJobho hahuna kuchena sokutaura kwaanoita uye kuti ikoku kunotsanangura mugariro wakashata waJobho. Asika “kana ukadzokera kuno Wamasimba Ose,” anorondedzera kudaro Erifazi, “uchakunzwa.”—22:23, 27.
25 Jobho mukupindura anoramba pomero yakaipa yaErifazi, achitaura kuti anoshuva kutongwa pamberi paMwari, uyo anoziva nezvenzira yake yakarurama. Kuna avo vanodzvinyirira vasina baba, chirikadzi, uye varombo navanoponda, vanoba, uye vanopomba. Vangaratidzika kuva vanobudirira kwechinguvana, asi vachawana havo tuso yavo. Vachaparadzwa. “Kana zvisina kudaro zvino, ndiani ungati ndine nhema?” Jobho anodenha kudaro.—24:25.
26. Bhirdhadhi naZofari vane zvimwei zvokutaura?
26 Bhirdhadhi anoita mhinduro pfupi kuna ikoku, achisimbisa chibvumikiso chake chokuti hakuna munhu anogona kuva akachena pamberi paMwari. Zofari anokundikana kutora rutivi munhambo iyi yechitatu. Haana chinhu chokutaura.
27. Zvino Jobho anokudza sei ukuru hwaWamasimba Ose?
27 Chibvumikiso chokugumisira chaJobho (26:1–31:40). Mukutaura kwake kwokupedzisira, Jobho anonyaradza chose chose shamwari dzake. (32:12, 15, 16) Noruzvidzo rukuru anoti: “Wakabetsera sei usina simba! . . . Wakapa mano sei usina kungwara!” (26:2, 3) Hapana chinhu, zvisinei, kwete kunyange Sheori, chinogona kuvanzira chinhu chipi nechipi meso aMwari. Jobho anorondedzera uchenjeri hwaMwari kunze kwechadenga, pasi, makore, gungwa, uye mhepo—izvo zvose munhu akacherekedza. Izvozvi zvinongova bedzi micheto yenzira dzoWamasimba Ose. Hazvisati zvichitongova zevezeve roukuru hwoWamasimba Ose.
28. Kutaurai kwakananga kunoita Jobho pamusoro peperero?
28 Apwiswa nokuva kwake asina mhaka, anozivisa, kuti: “Kutozosvikira ndaparara handisati ndichizorasha perero yangu!” (27:5, NW) Aiwa, Jobho haana kuita chinhu chipi nechipi kuti afanirwe nechakamuwira. Kusiyana nepomero dzavo, Mwari achatusa perero kupfurikidza nokuona kuti zvinhu zvakachengetwa navakaipa murubudiriro rwavo zvichagarwa nhaka navakarurama.
29. Jobho anotsanangura sei uchenjeri?
29 Munhu anoziva apo pfuma yapasi (sirivha, ndarama, ndarira) inobva, “asi uchenjeri humene—hunobva kupiko?” (28:20, NW) Akahutsvaka pakati pavapenyu; akanzvera mugungwa; hahugoni kutengwa nendarama kana kuti sirivha. Mwari ndiye anonzwisisa uchenjeri. Anoona kumigumo yapasi namatenga, anogovera mhepo nemvura, uye anodzora mvura namakore edutu. Jobho anogumisa kuti: “Tarira! Kutya Jehovha—ndiko uchenjeri, uye kubva pane zvakashata inzwisiso.”—28:28, NW.
30. Jobho anoshuva kudzorerwai, asi ndoupi uri mugariro wake wazvino?
30 Jobho anotambudzika anotevera kupa nhau youpenyu hwake. Anoshuva kudzorerwa kumugariro wake wekare wapedyo naMwari, apo iye airemekedzwa kunyange navatungamiriri vetaundi. Aiva mudzikinuri wavanotambudzika nameso kumapofu. Zano rake rakanga rakanaka, uye vanhu vaimirira mashoko ake. Asika zvino, panzvimbo pokuva nechimiro chinokudzwa, anosekwa kunyange naavo vachiri vaduku mumazuva, vane vanababa vakanga vasina kunyange kukodzera kuva pakati pembwa dzeboka rake. Vanomupfira mate nokumushora. Zvino, mukutambudzika kwake kukurusa, havamupi zororo.
31. Jobho anoratidzira chivimbo murutongeso rwaani, uye anotaurei pamusoro pechinyorwa chechokwadi choupenyu hwake?
31 Jobho anozvirondedzera amene somunhu akazvipira uye anokumbira kutongwa naJehovha. “Achandiyera pachiyero chakarurama uye Mwari achaziva perero yangu.” (31:6, NW) Jobho anodzivirira zviito zvake zvomunguva yakapfuura. Ave asiri mhombwe, kana kuti anorukira vamwe mazano. Haana kuregeredza kubetsera vanoshayiwa. Haana kuvimba nepfuma yokunyama, kunyange zvazvo akanga akapfuma. Haana kunamata zuva, mwedzi, uye nyeredzi, nokuti “chinhu ichiwo chaiva chakaipa chinofanira kurohwa navatongi; nokuti ndinenge ndaramba Mwari uri kumusoro.” (31:28) Jobho anokumbira mukwikwidzani wake pamutemo kuti apomere chinyorwa chechokwadi choupenyu hwake.
32. (a) Ndiani zvino anotaura? (b) Neiko kutsamwa kwaErihu kuchiitirwa Jobho neshamwari dzake, uye chii chinomugombedzera kuti ataure?
32 Erihu anotaura (32:1–37:24). Munguva yacho, Erihu, muzukuru waBhuzi, mwanakomana waNahori, uye nokudaro hama yokunyama yokure yaAbrahama, ave achiteerera gakava racho. Akamira nemhaka yokunzwa kuti avo vakura zvikuru muzera vanofanira kuva nezivo huru zvikuru. Handi zera, zvisinei, asi mudzimu waMwari unopa nzwisiso. Kutsamwa kwaErihu kunoitirwa “kuzivisa [kwaJobho] mweya wake amene kuva wakarurama panzvimbo paMwari,” asi kunotova kukuru zvikuru pashamwari nhatu dzaJobho nokuda kwokushayiwa kwadzo uchenjeri kunonzwisa urombo mukutaura kuti Mwari akaipa. Erihu a“va azere namashoko,” uye mudzimu waMwari unomugombedzera kutaura iwawa asi asina rusaruro kana kuti ‘kupa mazita okuremekedza pamunhu wapasi.’—Jobho 32:2, 3, 18-22, NW; Gen. 22:20, 21.
33. Jobho akakanganisa muchii, bva Mwari achamuratidza nyashai?
33 Erihu anotaura nouchokwadi, achibvuma kuti Mwari ndiye Musiki wake. Anoonesa kuti Jobho ave achiitira hanya zvikuru revererwo yake amene kupfuura yaMwari. Kwakanga kusiri madikanwa kuti Mwari apindure mashoko ose aJobho, sokunge kuti Iye aifanira kururamisa zviito Zvake, asi Jobho akanga akwikwidzana naMwari. Zvisinei, sezvo mweya waJobho unoswedera pedyo nokufa, Mwari anomunzwira tsitsi nokutuma nhume, achiti: “Murwirei arege kuburukira kugomba! Ndawana dzikinuro. Nyama yake ichava itsva kupfuura yomwana; uchadzokera kumazuva ouduku hwake.” (Jobho 33:24, 25) Vakarurama vachadzorerwa!
34. (a) Erihu anopa dzimwe tsiuroi? (b) Panzvimbo pokukudza kururama kwake amene, Jobho anofanira kuitei?
34 Erihu anokumbira vakachenjera kuti vateerere. Anotsiura Jobho nokuda kwokutaura kuti mukuva muchengeti weperero hamuna chibereko: “Mwari haangatongoiti zvisakarurama; Wamasimba Ose haangatongoiti zvakaipa. Nokuti ucharipira munhu sezvaakabata.” (34:10, 11) Anogona kubvisa chifemo choupenyu, uye nyama yose ichaparara. Mwari anotonga pasina rusaruro. Jobho ave achinyanyoisa kururama kwake amene pamberi. Ave achikurumidza, kwete kudaro nenzira youne, asi “asingazivi”; uye Mwari ave ane mwoyo murefu naye. (34:35) Zvakawanda zvinofanira kutaurwa nokuda kwerevererwo yaMwari. Mwari haasati achizobvisa meso ake pana vakarurama, asi achavatsiura. “Haachengeti upenyu hwavakaipa; asi unoruramisira vanotambudzika.” (36:6) Mwari zvaari Murayiridzi mukurusa, Jobho anofanira kukudza mubato Wake.
35. (a) Jobho anofanira kupa ngwariro kuchii? (b) Jehovha acharatidza nyasha kuna ani?
35 Mumamiriro ezvinhu anotyisa edutu riri kuungana, Erihu anotaura nezvezvinhu zvikuru zvinoitwa naMwari uye nezvokudzora Kwake masimba omusikirwo. Kuna Jobho iye anoti: “Chimbomirai murangarire mabasa anoshamisa aMwari.” (37:14) Rangarira ukomba hwendarama nechiremera chinotyisa zvaMwari, zvinopfuura kuwana kwomunhu. “Une simba guru guru; haangatambudzi pakutonga nokururama kukuru.” Hungu, Jehovha ucharangarira avo vanomutya, kwete avo “vane mwoyo yakachenjera.”—37:23, 24.
36. Jehovha amene zvino anodzidzisa Jobho kupfurikidza nechifundoi chinoshanda uye kupfurikidza nenhevedzanoi yemibvunzo?
36 Jehovha anopindura Jobho (38:1–42:6). Jobho akanga akumbira Mwari kutaura kwaari. Zvino Jehovha nenzira ine chiremera anopindura ari mudutu. Anoisa pamberi paJobho nhevedzano yemibvunzo iyo iri mairi imene chifundo chinoshanda muuduku hwomunhu noukuru hwaMwari. “Wakanga uripiko panguva yandakateya nheyo dzenyika? . . . Ndianiko wakateya ibwe rayo rekona? Panguva yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, uye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nomufaro?” (38:4, 6, 7) Ikoko kakanga kari kare kare nguva yaJobho isati yasvika! Mumwe pashure pomumwe, mibvunzo inomutswa iyo Jobho asingagoni kupindura, Jehovha zvaanonongedzera kugungwa rapasi, nguo yaro yegore, mambakwedza, masuo orufu, uye chiedza nerima. “Unenge unoziva hako, nokuti wakanga wakazvarwa panguva iyo! Mazuva ako anenge akawanda kwazvo!” (38:21) Uye zvakadiniko namatura echando neechimvuramabwe, dutu nemvura namadonhedza edova, chando nechando chichena, zvinyamutanhatu zvikuru zvokudenga, mheni namakore, uye mhuka neshiri?
37. Ndemimwe mibvunzoi inoninipisa Jobho, uye iye anogombedzerwa kubvumei uye kuita?
37 Jobho anobvuma nokuzvininipisa, kuti: “Tarirai, ini ndiri muduku hangu; ndingakupindurai here? Ndinofumbira muromo wangu.” (40:4) Jehovha anorayira Jobho kutarisana nenhau yacho. Anobvunza imwe nhevedzano yemibvunzo inodenha inokudza chiremera chake, ukuru, uye simba, sezvinoratidzirwa muzvisiko zvake zvomusikirwo. Kunyange Mvuu neNgwena zvine simba zvikuru kupfuura Jobho! Aninipiswa chose chose, Jobho anobvuma murangariro wake usakarurama, uye anobvuma kuti akataura asina zivo. Achiona Mwari zvino, kwete kupfurikidza nokungonzwawo asi nenzwisiso, anochinja kutaura ndokupfidza “muguruva namadota.”—42:6.
38. (a) Jehovha anopedza sei naErifazi neshamwari dzake? (b) Anopa Jobho nyashai nechikomborero?
38 Rutongeso nechikomborero zvaJehovha (42:7-17). Jehovha anotevera kupomera Erifazi neshamwari dzake mbiri kusataura zvinhu zvechokwadi pamusoro Pake. Vanofanira kugovera zvibayiro ndokuita kuti Jobho avanyengeterere. Pashure paikoku, Jehovha anoshandura mugariro wokutapwa waJobho, achimukomborera nechitsama chakapetwa kaviri. Vanun’una vake, hanzvadzi, uye shamwari dzake dzekare vanodzokera kwaari nezvipo, uye iye anokomborerwa kakawanda nekaviri namakwai, ngamera, mombe, uye mbongorokadzi kupfuura kare. Anovazve navana vane gumi, vanasikana vake vatatu vachiva vakadzi vakanaka zvikurusa munyika yose. Upenyu hwake hunotambanudzwa nenzira inoshamisa namakore 140, zvokuti iye anosvika pakuona zvizvarwa zvina zvavana vake. Anofa “akwegura, ava namazuva mazhinji.”—42:17.
39. Bhuku raJobho rinokudza uye rinorumbidza Jehovha munzirai dzakasiyana-siyana?
39 Bhuku raJobho rinokudza Jehovha uye rinopupurira uchenjeri hwake nesimba zvisingayereki. (12:12, 13; 37:23) Mune iri bhuku rimwe, Mwari anonongedzerwa kwaari soWamasimba Ose ka31, ako kari kazhinji zvikuru kupfuura mumamwe ose asara aMagwaro. Nhoroondo yacho inokudza kusaguma kwake uye nenzvimbo yakakwirira (10:5; 36:4, 22, 26; 40:2; 42:2) pamwe chete neruramisiro yake, mutsa worudo, uye ngoni (36:5-7; 10:12; 42:12). Rinosimbisa revererwo yaJehovha kupfuura ruponeso rwomunhu. (33:12; 34:10, 12; 35:2; 36:24; 40:8) Jehovha, Mwari waIsraeri, anoratidzwa kuvawo Mwari waJobho.
40. (a) Bhuku raJobho rinokudza uye rinotsanangura sei mabasa okusika aMwari? (b) Rinopa sei rumbonera rwedzidziso dzaMagwaro echiKristu echiGiriki uye rinotsinhirana sei nadzo?
40 Chinyorwa chiri mubhuku raJobho chinokudza uye chinotsanangura basa rokusika raMwari. (38:4–39:30; 40:15, 19; 41:1; 35:10) Chinotsinhirana nokutaura kwaGenesi kwokuti munhu akaitwa neguruva uye kuti iye anodzokera kwariri. (Jobho 10:8, 9; Gen. 2:7; 3:19) Chinoshandisa mashoko okuti “mununuri,” “rudzikinuro,” uye “kuraramazve,” nokudaro richipa rumbonera rwedzidziso dzakatanhamara dziri muMagwaro echiGiriki echiKristu. (Jobho 19:25; 33:24; 14:13, 14) Mashoko akawanda ebhuku racho akashandiswa kana kuti kuwiriraniswa navaporofita uye navanyori vechiKristu. Enzanisa, somuenzaniso, naJobho 7:17—Pisarema 8:4; Jobho 9:24—1 Johane 5:19; Jobho 10:8—Pisarema 119:73; Jobho 12:25—Dheuteronomio 28:29; Jobho 24:23—Zvirevo 15:3; Jobho 26:8—Zvirevo 30:4; Jobho 28:12, 13, 15-19—Zvirevo 3:13-15; Jobho 39:30—Mateo 24:28.*
41. (a) Mipimoi yokutonga kwaMwari inosimbiswa mubhuku raJobho? (b) Mubatiri waMwari Jobho nenzira yakatanhamara muenzaniso wakaisvonaka muchii kwatiri nhasi?
41 Mipimo yakarurama yaJehovha yokurarama inooneswa muzvikamu zvamashoko zvakawanda. Bhuku racho rinoshurikidza zvakasimba kudisa zvinhu zvenyika (Jobho 31:24, 25), kunamata zvidhori (31:26-28), upombwe (31:9-12), kufarira zvakaipa (31:29), kusaruramisira norusaruro (31:13; 32:21), udyire (31:16-21), uye kusatendeseka nokureva nhema (31:5), kuratidza kuti munhu anoshandisa izvi zvinhu haagoni kuwana tendero yaMwari noupenyu husingagumi. Erihu muenzaniso wakaisvonaka woruremekedzo rukuru nokuzvininipisa, pamwe chete noutsungarari, ushingi, uye kukudzwa kwaMwari. (32:2, 6, 7, 9, 10, 18-20; 33:6, 33) Kushandisa kwaJobho amene umusoro, kurangarira mhuri yake, uye kugamuchira vaeni zvinogoverawo chifundo chakaisvonaka. (1:5; 2:9, 10; 31:32) Zvisinei, Jobho anoyeukwa zvikurusa nokuda kwokuchengeta kwake perero netsungiriro yokushivirira, achigadza muenzaniso wakabvumikisa kuva dziviriro inosimbisa kutenda nokuda kwavabatiri vaMwari mumazera ose uye zvikurukuru munguva dzino dzinoedza kutenda. “Makanzwa nezvetsungiriro yaJobho uye makaona mugumisiro wakapiwa naJehovha, kuti Jehovha ane rudo rukuru uye ane ngoni.”—Jak. 5:11, NW.
42. Inhaui huru yoUmambo inokosha inojekeswa mubhuku raJobho, uye mativii anofadza eiyi nhau anotsanangurwa?
42 Jobho akanga asati ari mumwe wembeu yaAbrahama uko zvipikirwa zvoUmambo zvakapiwa, bva chinyorwa pamusoro peperero yake chinoita zvakawanda kujekesa kunzwisiswa kwezvinangwa zvoUmambo hwaJehovha. Bhuku racho rutivi runokosha rwechinyorwa choumwari, nokuti rinozivisa nhau huru iri pakati paMwari naSatani, iyo inobatanidza perero yomunhu kuna Jehovha saChangamire wake. Rinoratidza kuti ngirozi, idzo dzakasikwa pasi nomunhu zvisati, vacherekedziwo uye dzinofarira zvikuru pasi rino nomugumisiro wegakava racho. (Jobho 1:6-12; 2:1-5; 38:6, 7) Rinoratidzira kuti gakava racho rakavapo zuva raJobho risati rasvika uye kuti Satani munhu chaiyeiye womudzimu. Kana bhuku raJobho rakanyorwa naMosesi, uku ndiko kuoneka kwokutanga kweshoko rokuti has·Sa·tanʹ murugwaro rwechiHebheru rweBhaibheri, kuchipa imwe zivikanwo ye“nyoka yekare.” (Jobho 1:6, NW, mashoko omuzasi; Zvak. 12:9) Bhuku racho rinobvumikisawo kuti Mwari haasati ari chisakiso chokutambura kworudzi rwomunhu, chirwere, uye rufu, uye rinotsanangura chikonzero nei vakarurama vachitambudzwa, nepo vakaipa uye uipi zvichibvumidzwa kupfuurira. Rinoratidza kuti Jehovha anofarira kusundira nhau yacho kusvikira kupedzwa kwayo kwokupedzisira.
43. Mutsinhirano nezvakazarurwa zviri mubhuku raJobho, inzirai inofanira zvino kuteverwa navose vanotsvaka zvikomborero zvoUmambo hwaMwari?
43 Zvino ndiyo nguva apo vose vanoda kurarama mukutonga kwoUmambo hwaMwari vanofanira kupindura Satani, “mupomeri,” kupfurikidza nenzira yavo yeperero. (Zvak. 12:10, 11) Kunyange pakati pe‘miedzo inokangaidza,’ vachengeti veperero vanofanira kupfuurira kunyengetera kuti zita raMwari ritsveneswe uye kuti Umambo hwake huuye ndokuparadza Satani nembeu yake yose inonyomba. Irero richava “zuva rokurwa nehondo” raMwari rinofanira kuteverwa norusununguko nezvikomborero umo Jobho aikarira kugoverana.—1 Pet. 4:12; Mat. 6:9, 10; Jobho 38:23; 14:13-15.
Insight on the Scriptures, Vhor. 1, mapeji 280-1, 663, 668, 1166; Vhor. 2, mapeji 562-3.
1987, Vhor. 6, peji 562.
Insight on the Scriptures, Vhor. 2, peji 83.